Kilalao saka: baolina volon'ondry | Asa tanana
Ale Jimenez | | Fotoana manokana, fanodinana
Kely kely noho ny 3 volana lasa izay niarahaba tamina saka kely nania ao an-trano ary ankehitriny dia somary milalao izy, nefa mampiala voly ny tenany. Amin'ny baoritra na baoritra baoritra hitany fotsiny dia manomboka milalao toy ny vehivavy mamoy fo izy.
Noho io antony io dia te-hanao a fanomezana manokana ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany ary inona no mihoatra ny baolina lehibe an'ny Lana hanana fahafinaretana ary mamoaka ireo nerveau rehetra ireo. Tsy afaka naka sary tamin'ny toe-javatra nisy aho rehefa nilalao, fa raha fantatro kosa, eny, ka atolotro anao, Gato no iantsoana azy.
Lakaoly sy lakaoly silika.
Hofonosinay ny baolina vita amin'ny polystyrene amin'ny ravin'ny gazety.
Haka loko volon'ondry izahay ary hanao a fatotra mafy, mamela tadiny lava hanantonan'ilay baolina.
Hanomboka isika ahodino amin'ny kofehy ilay baolina mandra-pahatongantsika.
Hamatotra ny volon'ondry vaovao ao anaty kapaoty isika fa nandao ela izahay, ary namela kely ihany koa hahantona.
Hanomboka isika mihodinkodina manakodia azy toy ny iray ihany.
Rehefa tototry ny volon'ondry tanteraka ny baolina, hametaka silipo ny kapôty isika.
Hanao a afangaro amin'ny lakaoly sy lakaoly mba omeo sosona ny baolina ka tsy hikorontana na vaky izy rehefa manaikitra ao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » fanodinana » DIY: Ball Ball